यी खाने कुरा, जसले तपाइको सेक्स जीवनलाई बर्बाद गर्छ ! – Saurahaonline.com
यी खाने कुरा, जसले तपाइको सेक्स जीवनलाई बर्बाद गर्छ !
काठमाडौँ, १ बैशाख । जिवनलार्य सुखद बनाउनका लािग सुखद योन जिवनको आवस्यक छ । सुखःद यौन जीवनका लागि खानपानको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तपाई खानामा यस्ता खानेकुरा समावेश गर्नु जसले तपाईको यौनशक्ति बढाओस् । यदि तपाई राम्रो यौनजीवन चाहानुहुन्छ भने यी यौन चाहानालाई बर्बाद गर्ने खानेकुराबाट बच्नुहोस्स्
द न्यू इग्ल्याण्ड जनरल अफ मेडिसिनमा प्रकाशित एक रिर्पोटका अनुसार चिनी मिश्रित पेयपदार्थ ९सुगर स्वीटेड ब्रेवरेज० खानाले तौल बढाउने र डायविटिज जस्ता रोग लाग्छ । यसले शरीरमा गुलियो विषादी ९जीन ऐसिटेड ड्रिंक्स० को मात्रा अधिक हुनछ । जसले डेटलेकेवेटीज, मोटोपन, डिहाइड्रेशन र हड्की कमजोर हुने जस्ता समस्याले यौनइच्छामा कमी ल्याउँछ ।